Facer app သုံး Smart Watch Face တွေကို ဘယ်လို manually install လုပ်မလဲ...
ပျက်စီးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ကျွန်တော် မောင်လှနှင့် မဆိုင်ပါကြောင်း
ပထမဦးဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေက...
Facer app ကို android wear Smart Watch နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ android handset ထဲ install လုပ်ပြီး Smart Watch မှာ facer သုံး watch face တွေ ပြောင်းလို့ ရမရ စစ်ဆေးပါ... အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျတော်လုပ်ထားတဲ့ MgHlaFacer.zip fileဖိုင်ကို ဒေါင်းပါ...
မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ adb install လုပ်ထားပါ... ကွန်ပျူတာနဲ့ smart watch ကို usb ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး adb အလုပ် မလုပ် စမ်းသပ်ပါ... adb နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနည်းကို http://corbindavenport.com/?p=167 လေ့လာပါ...
facer app လည်း အလုပ်လုပ်ပြီ ကွန်ပျူတာနဲ့ smart watch ကို adb command သုံးပြီး ချိတ်ဆက်လို့ရပြီ ဆိုရင်...
ကျတော် download လုပ်ခိုင်းထားတဲ့ MgHlaFacer.zip ဖိုင်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ Desktop ပေါ် ဖြည်ပါ... MgHlaFacer ဆိုပြီး desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်... သူ့ရဲ့ path လမ်းကြောင်းက "C:\_Users\_MgHla\_Desktop\_MgHlaFacer" ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... MgHla နေရာမှာ မိမိ computer မှာ လတ်တလော အသုံးပြုနေတဲ့ user name ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... ကျတော်က MgHla လို့ သုံးပြီးတော့ပဲ ရေးပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
terminal/DOS command ထဲဝင်ပြီး adb command ဖြစ်တဲ့
adb push C:\_Users\_MgHla\_Desktop\_MgHlaFacer /sdcard/Facer (Windows)
adb push ./desktop/facer/MgHlaFacer /sdcard/Facer (Mac) ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ...
ကျတော်က Mac OS X မှာ အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်လို့ အခုလို မြင်ရပါတယ်...
$ adb push ./desktop/facer/MgHlaFacer /sdcard/Facer
push: ./desktop/facer/MgHlaFacer/9DEzgQtElK/fonts/WAHOneFourWatch_2_ttf -> /sdcard/Facer/9DEzgQtElK/fonts/WAHOneFourWatch_2_ttf
push: ./desktop/facer/MgHlaFacer/9DEzgQtElK/fonts/WAHMacforWatch2_ttf -> /sdcard/Facer/9DEzgQtElK/fonts/WAHMacforWatch2_ttf
push: ./desktop/facer/MgHlaFacer/9DEzgQtElK/fonts .........................................................................................................
.........112 files pushed.0files skipped.
2220 KB/s (9726424 bytes in 4.278s)
လို့ ပေါ်လာပြီ ဆိုရင် MgHlaFacer folder ထဲက folder တွေ file တွေ smart watch ထဲ ရောက်သွားပါပြီ..
Smart Watch ရဲ့ watch face ပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ ကျတော်လုပ်ထားတဲ့ watch face တွေ ပြောင်းပြီး အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ...
android wear facer app smart watch watch face zenwatch